Real Racing3Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ရီးရဲလ်ပြိုင်ပွဲ 3
ရီးရဲလ်ပြိုင်ပွဲ3APK ကို
ရီးရဲလ်ပြိုင်ပွဲ3မိုဘိုင်းပြိုင်ကားဂိမ်းအသစ်တစ်ခုစံသတ်မှတ်သောဆုရဂိမ်းဖြစ်ပါသည် - သင်ကယုံကြည်ဖို့ကကစားရန်ရှိသည်။
မိုဘိုင်း Excellence Awards ဆုပေးပွဲ - WINNER: အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်း 2013
ဂိမ်း Connect ကိုအာရှပစိဖိတ် - WINNER: အဆိုပါတစ်နှစ်တာ 2013 ၏ဂိမ်း, နည်းပညာ Excellence, Excellence အနုပညာအတွက်
Meffy ဆုပေးပွဲ - ဆန်ကာတင်: အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်း 2013
ရီးရဲလ်ပြိုင်ပွဲ339 အစစ်အမှန်ကမ္ဘာနေရာများမှာ 17 ဆားကစ်နှင့်အတူတရားဝင်လိုင်စင်ရပုဒ်တစ်ခုအစဉ်အဆက်-တိုးချဲ့တန်းစီဇယား features တစ် 43-ကားတစ်စီးဇယားကွက်နှင့်ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများထံမှ 140 စေ့စပ်အသေးစိတ်ကားများကျော်။ Plus အားအချိန်နှင့်တပြေးညီကစားသူအများအပြား, လူမှုရေးခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များ, အချိန်စမ်းသပ်မှုညဉ့်အခါပြိုင်ကားများနှင့်ဆန်းသစ်သောအချိန်အချိန်မရွေး, ဘယ်နေရာမှာမဆို, သင်မည်သူမဆို Race ခွင့်အများအပြား™ (TSM) နည်းပညာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။
Real Racing ချီးမွမ်းခြင်း 3
(Pocket ဂိမ်းကစားသူ,9/ 10, Gold Award) "ပြိုင်ကားဂိမ်းအဘို့အမိုဘိုင်းပေါ်တွင်အသစ်ကစံစေ '
Ford ကား, Ferrari ပြိုင်ကား, Lamborghini က, Aston Martin နဲ့ Mercedes-Benz များကဲ့သို့အထင်ကရထုတ်လုပ်သူများထံမှ 140 ကျော်အပြင်းအထန်အသေးစိတ်ယာဉ်များ၏ဘီးကို ယူ. တစ်ဦးစစ်မှန် 43 ကားပြိုင်ပွဲဇယားကွက်ပေါ်တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ရန် - ဆိုလက်ကိုင်အပေါ်အများဆုံးမော်ကွန်းပြိုင်ကားအတွေ့အကြုံကို။
Silverstone, Hockenheimring, Le Mans, ဒူဘိုင်း Autodrome နှင့်များစွာသောပိုပြီးအပါအဝင်ထိပ်တန်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနေရာများမှမျိုးစုံ configurations အတွက် 17 အစစ်အမှန်ပုဒ်၏အပြည့်အဝ lineup အပေါ်ရော်ဘာမီးရှို့ရမည်။
မူကြမ်းရေးဆွဲအတူမိတ်ဆွေများနှင့်ပြိုင်ဘက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 8-player ကိုအတွက် Cross-platform, Real-time ပြိုင်ကားနှင့်အတူဘန်ပါမှဘန်ပါသွားပါ။ ဒါမှမဟုတ်အချိန်-ပြောင်းရွှေ့ကစားသူအများအပြား™မှာသူတို့ရဲ့ AI အ-controlled ဗားရှင်းစိန်ခေါ်ဖို့မည်သည့်လူမျိုးသို့ drop ။
ဖလားပြိုင်ပွဲ, ပပျောက်ရေးနှင့်ခံနိုငျရညျစိန်ခေါ်မှုများအပါအဝင် 4,000 ဖြစ်ရပ်များကျော်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ သင့်ကားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့အဆင့်မြှင့်၏ကျယ်ပြန့ထံမှရွေးချယ်ပါ။ သုတ်ဆေး, ဗီနိုင်းနှင့်ဘီးဝန်း၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းနှင့်သင်၏ကားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ ကင်မရာကိုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေအရေးယူ View, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုရန် HUD နှင့်ဒဏ်ငွေ-ညှိထိန်းချုပ်မှု tweaks ။
ထူးခြားအံ့ဖွယ် Mint, ™3အင်ဂျင်အားဖြင့် Powered, ရီးရဲလ်ပြိုင်ပွဲ3အသေးစိတ်ကားတစ်စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အပြည့်အဝလည်ပတ်နောက်ဘက်အမြင်မှန်များနှင့်အမှန်တကယ် HD ကိုပြိုင်ကားများအတွက်ပြောင်းလဲနေသောထင်ဟပ်ပါရှိပါတယ်။ အစဉ်အဆက်အများဆုံးအဆင့်မြင့် Cross-platform လူမှုရေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ပြိုင်ကားအသိုင်းအဝုိင်းနဲ့ကြွယ်ဝသော, မျိုးဆက်သစ်ဂိမ်းခံစားပါ။ ရီးရဲလ်ပြိုင်ပွဲ3ကအားလုံးကိုကယ်တင်နှင့်တိုင်း update ကိုအတူနယ်နိမိတ်တွန်း။
အဆိုပါ4Porsche 2019 ကေမန် GT718 Clubsport,4Aston Martin Vantage GT2019,4Chevrolet ကား Camaro GT2018.R,4Mercedes-AMG က GT2018 နှင့်4Audi R2018: ငါး All-အသစ်သောကားများ featuring ငါးခုလီမိတက်အချိန်စီးရီးအတူ GT8 တပ်အားကစား Group မှအပေါ်ကိုယူ LMS GT4!
• Access ကိုလီမိတက်အချိန်စီးရီးနှင့်အထူးပွဲများကိုသင်လွဲချော်ခဲ့ကြပေမည်ကားများဝင်ငွေ
•အ Lamborghini က Sesto Elemento ဝင်ငွေအားအသစ်သောလီမိတက်အချိန်စီးရီးအပေါ်ကိုယူ
• RRTV အပေါင်းတို့၌အသစ်သောအကြောင်းအရာအထဲက Check
သင့်ရဲ့အင်ဂျင် Rev နှင့်ပြိုင်ကား start!
29.03 ကို MB
ဇူလိုင်လ 14, 2019 မှာ 10: 53 နံနက်
appsapk.com ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးဂိမ်းမဟုတ်ဒီပြ သ. မရပါဂိမ်းများကိုလိုခငျြ